Ny Redmi K20 no anaran'i Redmi avo lenta | Androidsis
Fantatray nandritra ny herinandro maro izay Redmi miasa amin'ny finday avo lenta, izay hanana Snapdragon 855 ho mpikirakira. Tao anatin'izay herinandro izay dia efa nanana famoahana ampy momba ity fitaovana ity izahay. Betsaka ihany koa ny tsaho momba ny anarana hananan'ny telefaona. Na dia zavatra efa hitanay izao aza izany. Satria voamarina fa ho Redmi K20.
Ity Redmi K20 ity no avo lenta voalohany amin'ny marika sinoa. Mbola mistery ny daty namoahana azy, na dia heverina aza fa mety ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ity volana Mey ity izy. Ka tokony hahafantatra bebe kokoa momba an'ity telefaona ity isika afaka herinandro vitsivitsy.
Any Shina aza dia misy ny tombantombana hoe io finday io afaka mivarotra ivelan'ny firenena amin'ny anarana Pocophone F2. Saingy toa tsaho miely kokoa izy ireo, tsy misy fanamafisana. Ho hitantsika raha hamidy amin'ny alàlan'ny marika hafa ity Redmi K20 ity, na dia tsy azo inoana aza izany amin'ny taratasy.
Namela telefaona maromaro i Redmi tamin'ity taona ity, indrindra eo amin'ny mid-range sy ambany. Finday sasany mivarotra tsara, toa ny Note 7, izay mahomby eo amin'ny tsena. Voatosiky ny varotra tsara any India, tsena iray izay ahombiazan'ny marika sinoa.
Ity Redmi K20 ity no fidiranao amin'ny sehatra tena mifaninana, toy ny avo lenta, anjakan'ny marika vitsivitsy. Fa raha manolotra telefaona manana sanda ara-bola tsara izy ireo, toa izany no izy. Noho izany dia miatrika maodely afaka manome be resaka momba an'ity tsena ity isika.
Azo antoka fa manantena zavatra betsaka amin'ity finday ity isika. Amin'izao fotoana izao, mbola vinavinaina ihany fa ho tonga alohan'ny faran'ny volana ity Redmi K20 ity, na dia efa eo afovoany aza isika. Fa manantena izahay fa hisy vaovao momba ny fahatongavanao tsy ho ela. Ny orinasa dia nilaza fotsiny fa ho avy tsy ho ela ny fahatongavany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Redmi K20: io no ho anaran'ny avo lenta an'i Redmi